कोरोना नेगेटिभ देखिनु कोरोना निको भएको हैन- विज्ञ – ThePressNepal
एमाले नेता योगेश भट्टराई उच्च ज्वरोका कारण अस्पताल भर्ना
मैत्रिपूर्ण खेलमा इन्डोनेसिया यू-२३ सँग नेपाल पराजित
कोरोना नेगेटिभ देखिनु कोरोना निको भएको हैन- विज्ञ
कोरोना नेगेटिभ देखिने वित्तिकै मानिस निको भएको भन्दै पहिलाको जस्तै व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जस्ले गर्दा पहिलेको जस्तै आहार व्याहार गर्दा मानिसमा पुन समस्या निम्तने भन्दै त्यसबाट सजग रहन आग्रह समेत गरेका छन् । डा. प्रकास ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै नेगेटिभ हुनु निको नभएको भन्दै लेखेका छन्
‘धेरै जनाले कोरोना नेगेटिभ हुनु लाई कोरोना निको भएको सम्झनु हुँदो रहेछ। कोरोना नेगेटिभ हुनु भनेको उसको शरीरमा कोरोना भाईरस नहुनु हो। उ अब भाईरस विहिन भयो । उ अब घुलमिल भए पनि अरु लाई सार्दैन। कोरोना निको हुनु भनेको कोरोना भाइरसले शरीरका विभिन्न अंगमा गरेको क्षति समेत निको हुनु पर्छ। कुनै रोग लागे पछि शरीरमा भएको क्षतिको कारणले कमजोरी हुने, पहिले जस्तो वल नहुने र कुनै काम गर्न आँट नआउने हुन्छ।
त्यस्तै रोगले गर्दा मनोसामाजिक समस्या हरु पनि हुन्छन। त्यसैले यी सबै समस्या हरु बाट मुक्त हुन केही समय लाग्छ। यो समय व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार ३ हप्ता देखि केही वर्ष पनि लाग्न सक्छ। केही व्यक्तिहरुले कोरोना नेगेटिभ भएकोलाई निको भएको सम्झी तुरुन्तै पूर्ववत व्यवहारमा फर्कदा समस्या बल्झिने, लङ कोभीड, पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम वा कतिपय अवस्थामा मृत्यु पनि हुने हुन्छ। त्यसैले केही समय आराम गर्ने, पोषिलो खानेकुरा खाने, अनुलोम विलोम गर्ने, घर परिवार तथा साथि भाई संग छलफल, रमाइलो गर्ने, तनाव नलिने गर्नु पर्छ। गुणस्तरिय शक्तिवर्धक आयुर्वेद औषधि प्रयोग गर्ने। घाम ताप्ने।‘
कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएको र निको भएकामा पनि पुन संक्रमण देखिन थालेको भन्दै मानिसमा कोरोनाको त्रास बढ्दो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि दैनिक दुई हजार बढि मानिसमा कोरोना संरक्रमण देखिन थालेको त्यव पनि परिक्षणको दायरा साधुरो भएको बेला ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसरा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ५ सय ८ जनामा कारोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । २४ घण्टामा देशभर ९ हजार २ सय ७९ वटा नमुना परीक्षण गरिएकोमा २ हजार ५ सय ८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालमा हालसम्म १४ लाख ४३ हजार ३ सय ४३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा १ लाख ७० हजार ७ सय ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा १ हजार ३ सय ५७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुसार आज थप २ हजार २ सय ६४ जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन् ।याेसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई घर फर्किनेको संख्या १ लाख ३१ हजार २सय २२ पुगेको छ । भने कोरोनाका कारण थप १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ सय ३७ पुगेको छ ।
Previous ओलीसंग चिडिएका प्रचण्ड पुन ओलीकै कित्तामा !
Next पौडेल पक्षको विरोधपत्रमा कार्तिक १७ गते छलफल हुने ।